Uummatni Sodaa Injifate Sobaaf Hin Jilbeefatu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooUummatni Sodaa Injifate Sobaaf Hin Jilbeefatu!
Damee Boruutin, Caamsaa 8, 2018
Uummatni Oromoo gootummaa hiriyyaa hin qabneen utuu rasaasni akka bokkaa itti roobaa jiru sodaa tokko malee diina dura dhaabbachuudhaan ilmaan isaa amma tokko magaagaa diinaa keessaa baafatee jira. Kan lubbuun jiran miti warra achi buuteen isaanii dhabame iyyuu jiran isaanis tahe lafeen isaanii argachuuf qabsoo hadhaa’aa wal irraa hin cinne gochaa jiru waan agarru. Tokko tokkoon dhala Oromo bakka gahame utuu hin argamiin qabsoon uummatni Oromoo gochaa jiru ni raawwata jedhee warri yaadu akka abjuu keessa jiran hubachuu qabu.
Har’a ilmaan Oromoo warri hojii basaastummaan TPLF guddifate dirqama hojjii dabbalummaa fudhatanii qabsoo uummata Oromoo dongorsanii galma isaa hanqisuuf wixxifachaa akka jiran waan ifatti mul’atu. Maqaaf naannoo fi biyya bulchuuf warri mudaman Obbo Lammaa Magrsaa fi Dr. Abiyi Ahmed hojiin isaanii inni duraa maqaa TPLF xuraa’uu irra darbeewaggaa 27 xiraa’ee karaa darbuu nama dhorkaa jiru qulqulleessuuf rakkataa jiru. Maqaa TPLF kan xuraa’ee jiru dhiiga ilmaan Oromoo, Gambeelaa, Sidaamaa, Ogadeen fi uummata Impaayera Itophiyaa keessa jiru maraan heeraa fi seera tokko malee lafa wajjin sila’ee bara dheeraa ture salphaatti qulquulleessuun hin danda’amu.
Akka Dr. Dabresiyoon uummata Tigrayi itti yaroo dubbatu jedhe “hoogantonni OPDO fi ANDM miseensotaa fi uummata isaanii itti waa’ee gaarummaa hojii TPLF barsiisaa fi hubachiisaa jiru. Kanaafuu uummatni keenya hin yaadahiina mootummaan ammas harkuma keenya jira jedhee” . Dhugaa dubate. Mootummaan nama tokko miti. Mootummaan sirna caasaa qabatamaa qabu. Caasaa mootummaa keessatti namni tokko hirmaataa hojii qaba. Yaroo hunda bakka ijaarsi jiruu namni tokko itti gaafatama fudhatee dura deemuu qaba. MM tahuun itti gaafatama duraa qabaachuu dha malee namni tokko seera mootummaan qabu ala waan biraa waan hojjechuu ni danda’a jechuu miti.
Hayilee Mariyaam Dasaleenyi waggaa jahaaf Masaraa Miniliki( Minilk Palace) keessa jiraachaa ture. Inni achi keessa jiraachuun Uummata Walayitaaf faayida qofaatti argamsiiseef ni jiraa? Ergama TPLF tahee olii fi gadi fiigaa oluu malee uummata keessaa dhalateef waan fideef tokko hin jiru. Uummatni Walaayitaa waggaa jahaaf Impaayeera Itoophiyaa bulchaa hin turre.Kan aangoo qabuu fi kan biyyaa bulchu TPLF qofa ture. Namumaa isaaf bareedaa tahuu danda’a sadarkaa aangoo irra waan jiruuf. Uummata inni keessaa dhalatee bu’aa tokko iyyuu qabachaa hin turre.
Waan nama gadisiisu OPDOn Diasporaa fi Baratoonni OPDO( OPDO Scholars) warra OPDOn barsiifte maqaa barumsaan biyya lafaa kana irra facaaftee jirtu Dr. Abiyi MM tahee mudamuu waan haaraa godhanii akka qabsoon Oromoo bakka gahee jiruu fakkeessanii dhiyyeessuu yaalu. Garaagarummaan Obbo Haayile Maariyaamii fi Dr. Abiyi jidduu jiru waa’ee namumaa utuu hin taane hirmaata hojii ti. Hojiin Dr. Abiyi hojii dabbaallummaa ti malee hojii biyya bulchuu miti. Namni kun yaroo barcuma irra taa’ee waa’ee biyyaa fi uummata isaa abdii sobaan isaa eegataa jiruu murteessuu miti maqaa isaa mallateessuuf yaroo hin qabu. Akkuma Muudameen Abdi Illee nama ilmaan Oromoo kumaatamaan ajjeesse , Miliyoonaan jiruu fi jireenyaa isaanii irraa buqqisee rakkinatti darbe Obbo Lammaa fi Dr. Abiyi gamaa gamanaan hudduu isaa dhungatanii deebi’an. Yaa Uummata Oromoo ilaalaa waan Abdii Illee uummata keenya gochaa jiru warra ergamtoota TPLF kana tufatee. Hojii xuraa TPLF isatu isaan caalaa hojjeta.
Adeemanii Oduu afuuffuun salphaa dha. Garuu waan dubbatan hojiin argsiisuun haalan jabaataa dha. OPDO fi baratoonni OPDO haqnii fi mirgi uummata Oromoo eegamee, eegamuu baate dhima isaanii miti. Dhiigni ilmaan akka lolaa bara dheeraaf dhngalaa’aa jiru kun illee isaanii hin mararu. Waan barbaadan dantaa mataa isaaniif amma argatan Oromiyaan bilisoomtee ykn boola seentee waan itti dhaga’amu hin jiru. Waan isaan akka bineensaatti sodaatanii fi gurraan dhaga’uu hin feene maqaa ABO jedhu. Yoo oduu keessa illee tasa maqaan ABO ka’e dhiiga isaanitu dhanfa. Maqaa amantiin WBOn isaan biratti baayyee dorkaa dha. TPLF ilmaan Oromoo qawween isa lafa irraa dugugaa oltu isaniif fudhatama qaba.
Namni Oromoo tokko Masaraa Miniliki keessa galuun Uummata Oromoo beelaa’aa, dheebotaa, hidhamaa, ajjeefamaa, tumama fi saamamaa jiruf waan fidu hin qabu. Erga Obbo Lammaa fi Dr. Abiyi gara hooganna naannoo Oromoo dhufanii uummatni Oromoo kumaatamaan dhume, kumaatama baayyeen lakkawwamu mana hidhaatti dararame, ummanti miliyoonnaa ol tahu biyyaa isaa fi biyya olaa keessatti baqataa tahee jireenya gadadoof saxilamee agarra. Saamchi qabeenya Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru madaallii hin qabu.
Uummatni Oromoo sodaa injifatee TPLF kokee qabee of irraa diibate soba dabballee TPLFiif ni jilbeefata jedhee hin yaadu hin yaada’u. TPLF hojii siyaasaa deemanii afuufuu Obbo Lammaaa fi Dr. Abiyi itti dabrsitee nagaan teesee of qaraa if of ijaaraa dinagdee biyyaa, waraanaa , humna tikaa fi nagaa harka galshatee fandalaalaa jirti. Akka uummatni Impaayera Itophiyaa fi biyyoota olaa ishee nuffe waan hubateef uummata duraa baatee of saaxiluu hin feetu. Ammas motor mootummaa EPRDF sochoosaa jiru TPLF qofa. Yoo TPLF hin jiranne Mootummaan EPRDF baabura motora hin qabne tahee bakkuma jirutti dhaabbata.
Uummatni Oromoo qabsoo bilisummaa kana wareegama guddaa baase asiin gahee jiru dabballoonni TPLF kun sagalee afaan qabsoo ergfachuudhaanii fi maqaa uummata Oromoon dhaadachuun qabsoo kana yoo uummata harkaa butanii gofachiisaan isaan chaalaa Uummata Oromootu seenaa gaddattii hafa. Isaan hojii TPLF keniteef hojjechaa jiru. Hojii kana itti amanaii fudhatanii jiru. Uummatni Oromoo akka isa sobaa jiran utuu beekuu maaliif calsee ilaala?
“Miximxini harkaan dhaaban ija nama gubdi”, jedha Oromoon. Waaqayyoo itti hin fidiin malee utuu jooraa jiru Dr. Abiyi bakka tokkotti utuu waa’ee tahe eenyuun qabna laata Masaraa Miniliki keessa? Partiin adda adda wal dorgomee namni tokko keessa yoo filama yaroo murtaheef partii filmaata irratti injifate sanatu biyya bulchuu qaba. Dr. Abiyi kan muude EPRDF waan tahee amma illee bakka isaa kan muuddatu EPRDF qofa. Abbaa barbaadan muuduun mirga isaanii. Gaafi sana warri Masaraa Miniliki galuu Oromoo faarsan maal akka jedhan hin beeku. Karaa galeen keessaa baanaa jechuu dha. Qabsoon uummata waa’ee taa’itaa namni tokko jireenya isa keessatti arachuuf ayyaana argatu irraa adda. Kan namni tokko argatu bareedaa tahus fokkisaa kan dhunfaa isaa ti.
Uummatni kan barbaadu hidhaa fi dhiitaan akka irraa dhaabatu, komandi postiin irraa ka’ee ijoolleen nagaan baatee akka galtu, siyaasaa, dingadee , aadaa fi aafaan isaa dhiibaa tokko malee karaa barbaadeen akka gudifatu. Hiree isaa ofiin murteefachuu Uumaan Waaqaa kan isaaf kenne nama biraa irraa eegachuu hin qabu. Haalli kun hojiin argamuu kan danda’u olola sobaan dogongoruu dhiifnee Xumura Fincilaa Garbumaa WBO fi QBO wajjin hiriira gallee finisisuudhani.
Ijnfannoo Ummata Oromoof!
kan akka kee oduu hafuufuu lafara dhalatee hiin jiiruu ama biiya alaa teessee oduu hafuuftuu maaliif gara biyaa seentee umata kanaaf hiin qabisoftuu, qabsoon kaniin galama ga’uu addemsa keessa malee takkatii miitii jiijirama amma argamee kanatii fayadamuun bakka kaayoo sanaa galmaan ga’uun nii danda’ama,galanii qeerroo waregamaniif hagaluu malee amma wantii baayee umata keenya jiibisisaa jiira warrota akka keessanii biiya alaa ta’anii umata ibidatii erganii qofa dhugaa dubachuuf taanaan caasefaminii ama jiiruu kuun haga feedhee yoo ergamtuu TPLF ta’ee iyyuu soochiin jiiruu fii mulataa jiiruu waan abdii namaaf keenuu waan ta’eef kana immoo ciinaa dhaabanee wal taanee galmaan ga’uu qabina malee hoolola hafuufuun homa tokkolee faayidaa hiin qabuu kanaaf obbolessa koo yaada duulomaa boodatii hafaa kana dhiisii kan umataaf fayaduu yaadii malee umata gara ibidatii deemaa waregamaa jeetee akka yaada nuuf barsituu hiin feenuu yoo danda’amee harcaatuu OPDO haftee jiirtuu tokko taanee manicaasinee kan umata keenyaaf fayaduu hoojechuutuu nuuraa eagama gaafiin umataa,miirgii umataa,jiijiramnii saba guudaaf akka ta’uu hawii keenyaaf feedhii keenya otoo hiin ta’iin qabsoo keenya bara dheeraa dha.
BILISUMAAN UMATA BALAAF